အစ္စရေးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စိုက်ပျိုးမြေများတွင် နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စမ်းသပ်မည့် အစီအစဉ်အား စတင်ဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
ဂျေရုဆလမ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံအစိုးရက စိုက်ပျိုးမြေများတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရေး စမ်းသပ်ရန် အစီအစဉ်တစ်ခုအား ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။အဆိုပါ စိုက်ပျိုးမြေများတွင် ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ခင်းများအပေါ်တွင် ဆိုလာပြားများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူနိုင်မည့် “agrivoltaic” စနစ်များအား အစ္စရေးနိုင်ငံက တီထွင်စမ်းသပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Ram-On ကျေးရွာရှိ စိုက်ခင်းတစ်ခုအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံအနှံ့ရှိ နေရာဒေသ ၁၀၀ တွင် အမျိုးမျိုးသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးသည့်မြေများတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀၀ မဂ္ဂဝပ်ခန့် ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတို့က ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စမ်းသပ်သည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် ကောက်ပဲသီးနှံများတွင် သစ်သီးခြံများ ၊ ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ကွင်းများ ၊ ပန်းပင်များ ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပင်များ ၊ စပျစ်ခြံများ ပါဝင်သည်။ ယင်းစမ်းသပ်သည့်စီမံကိန်းသည် သီးနှံအမျိုးအစား ၊ ပစ္စည်းကိရိယာအမြင့် နှင့် ရာသီဥတု ကဲ့သို့သော agrivoltaic စနစ်များအတွက် အသင့်ဆုံးဖြစ်သောအခြေအနေများအား ခွဲခြားနိုင်ရန် ကူညီကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများသည် နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုမြင့်မားခြင်း ၊ အငွေ့ပျံခြင်းတို့ကို လျှော့ချခြင်း နှင့် ဆည်မြောင်းစနစ်အား လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းတို့အဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော အဖြေလည်း ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ယင်းအစီအစဉ်သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်အား တိုးမြှင့်ရန် အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်အား မြှင့်တင်ရေးအတွက် နောက်ထပ် အဆင့်တစ်ဆင့် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ (Xinhua)
JERUSALEM, Jan. 11 (Xinhua) — The Israeli government announced Tuesdayaplan to test electricity generated from solar power facilities in arable lands.
Israel has been developing and testing the “agrivoltaic” systems that allow electricity to be generated from solar panels above crops in the same fields.
Crops involved in the testing program include orchards, field crops, flowers, spices, vineyards. The testing project helps to identify the optimal conditions for agrivoltaic systems, such as the crop type, facility height and climate.
The facilities also answer such agricultural purposes as reducing high radiation and transpiration, and streamlining irrigation, the statement noted.
The plan is another step in advancingagovernment decision to increase the target for electricity generation from renewable energies to 30 percent by 2030, it added. ■
Photo 1 – Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the Tzafit Natural Solar Power Station near southern Israeli city of Kiryat Malakhi. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)
Photo2– Aerial view showsafarm inanorthern Israeli village of Ram-On on Jan. 5, 2022. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)